Maxaa loo dhaawacay ???
Mawduucyadaada : 4
ka Qeeb Qaadashaadaada : 6
Is Diiwaangalintaa : 17/02/2011
Subject: Maxaa loo dhaawacay ??? Thu Feb 17, 2011 5:42 am
Waxeey aheeyd maalin muran hoosaad badani jiro, dadku Muslimiinta an qaar waxeey u aheeyd maalin aad u weeyn, dhalinyaradda iyo dadka danleeyda ah waxeey is weeydiinayeen xaafadeen ku hormarnaa iyo xaafadeen ku xijinaa (sabta), qaarna maalmaha caadiga ah waxbo kagama duwaneeyn.
Dadka gaaladda ah aad ayeey ugu faraxsanayeen maadaama loo sheegay in aay maantu tahay maalin howlaha dowladda laga nasanayo, waxaana loo cadeeyay in maanta aay ku beegnatahay dhalashadii Nabi Muxammed (CSWS), balse farxadooda kuma saleeysneeyn sababta fasaxa keentay ee farxadooda waxeey ku saleeysneeyd shaqo ka nasashadda.
Markaan magaaladda u soo dagay waxaan la kulmay laba nin oo akhyaar ah oon mid waliba dhinaca aan saxiibo kala ahay.
Mid waxaan isku aragti ka nahay dhibaatadda faraha ka baxday ee ka taagay wadankeeynii Soomaaliya, oo markuu mikeeyn dhacdo Somaliya ka dacdo soo maqlo isasoo waco kadibna halkaas aan ku calaacalno aan saxib ku nahay.
Akhyaarka kalana waxaan saaxiibo ku nahay xaga cibaadada rabi, marka saxibadeey waxaan ka codsaday inaan shaah wada cabno, weey iga aqbaleen markii shaahiga naloo keenay ayaa saxibadeey bilaabeen ineey ka hadlaan feestadda maanta shaqadda looga nasanyo, waxaan arkay saxibadeey oo hadalkii ka taag taagmay, waxaan damcay inaan hadalka dejito balse iima suurto galin, mid kamid ah saxibadey ayaa bakoorad iska soo jiiday saaxibkeey kale madaxa kaga dhuftay, dhiigii ka soo booday shaatiga ayuu iga qooyay markaasuu haddana markale ku celiyay, hadana sidoo kale.
Ciidamo ayaa nagu soo baxayoo kii dhaawaca ahaa isbitaal ayaan dhignay oo ilaa iyo 11 qodob ayaa la tolay, kii kalana xabsigaa la dhigay.
Runtii waxeey kala lahaayeen labo aragti mid waxa uu yiri mowliidkan waxaa la aasaasay 700 ilaa 800 sano kadib dhimashadii Nabi Muxammed (SCWS), kii kalan waxa uu yiri Mowliidku waa suno wanaagsan .
Marka walaalayaaloow shu'aasha taagan waxa aay tahay yaa qaldan oo gar daran, oo maxuu saaxibkeey saaxiibkiiykale ku dhaawacay???
Subject: Re: Maxaa loo dhaawacay ??? Fri Feb 18, 2011 3:43 am
kkkkkk sxb noo bayaani suaashaada ma fahmin aniga ahaanteeda ma ogi akhyaarta kale inay fahmeen soo koob sxb
Subject: Re: Maxaa loo dhaawacay ??? Sat Feb 19, 2011 3:23 am
Sxb laban nin oo garaheeyga midig iyo bidix kala ah, ayaa is dilay aniga oo la joogo, oo hadda midi il daranyahay kan kalana xabsiga jiifo, waxeeyna isku afdhaafeen Mowliidku waa suno wanaagsan iyo mowliidku wax sugan ma aha.
Marka aan soo koowo macno ahaan waa sidaan walaalkeeyoow, hadaba baahideeydda waxeey tahay in aad talo iga siisaan, sidii loogu garnaqi lahaa labadaan saxiibadeey ah, loona kala daaweeyn lahaa.
Walaalkeeyoow warka oo cad oo caano lagu daray waan ku soo hoos dhigay ee wax ka dheh.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.
Subject: Re: Maxaa loo dhaawacay ??? Sun Feb 20, 2011 9:23 pm
waaaaaaaaaaaaw sxb hadaan fahamay waxaa ka wadaa yaa sax san qofka mawliidka taageersan ama kan ka soo horjeeda??
ani xaga ahaanteeda kan ka soo horjeeda ayaa iila saxsan
Subject: Re: Maxaa loo dhaawacay ??? Sun Feb 20, 2011 11:05 pm
Walaalkeey Wadani waxa uu taageeray ninkii diidanaa Mowliidka, balse waxaan jeclaan lahaa inuu soo raaciyo sababta uu dhankaasi u taageeray.
Walaalayaal hadda waxaan mareeynaa Mowliid Maya 1- Mowliid Haa 0.
Waxaan jeclaan lahaa inaad ii soo gudbisaan ra'yigiin oo sababeeysan.
Subject: Re: Maxaa loo dhaawacay ??? Sun Feb 20, 2011 11:50 pm
wacalaykumu salaam walaal
waa mahadsantahay horta walaaal suaashaada qiimaha leh ee aad waydiisay walaalaha marka walaaal inkastoo uu cilmigeeda uu san zaaid u badneen laakin hadaa isku dayo suaashaada jawaabteeda waxay ila tahay
horta ma aysan aheenin saaxibkaada diidan mawliidka inuu ku xadgudbo saaxibkaada kale ee taageersan mawliidka.
marka walaal hadaan ku laabano diinteena iyo asxaabta iyo taabiciinta kama sugnaanin inay taageeeraan mawliidka waligoodana ma aysan dhigan wax mawliid lagu sheege marka walaal waxaan ku soo koobi lahaayay camalkaasi ee mawliidka waa wax bidco ah muslimiintana waa inay ka digtoonoodaan inay camlakaasi sameeyaaan salaamu calaykum
Subject: Re: Maxaa loo dhaawacay ??? Mon Feb 21, 2011 2:20 am
Walaalkeey Mujaahid123, kheyr alaha ku siiyo waxaad soo gudbisay mowqifkaaga oo sababeeysan, waxaana mareeynaa ilaa iyo hadda.
Mowliid Maya 2- Mowliid Haa 0.
Yaa ku soo daray?
Subject: Re: Maxaa loo dhaawacay ??? Mon Mar 21, 2011 10:54 pm
walaal waa salaamanyihiin walalaaha
aniga waxaan taageersanahay fikrada walaalka mujaahid123
Subject: Re: Maxaa loo dhaawacay ???